I-Semalt: IWebhu Yokudweba NgeSobho Esihle
Namuhla kunezindlela eziningi abantu abangakwazi ukukhipha idatha kumakhasi ahlukahlukene ewebhu. Amawebhusayithi amaningi, njenge-Google ne-Facebook, ahlinzeka ngama-API abaseshi bewebhu abangasebenzisa ukuze bafinyelele kuwo wonke ulwazi oluhlobene nabo olufunayo. Kodwa akuwona wonke amakhasi wewebhu afakwe ama-API, ngoba angase angafuni abafundi babo baqoqe noma yiluphi uhlobo lwazi oluvela kubo noma ngenxa yokuthi abanakho ubuchwepheshe obuphambili. Kodwa yini ama-web scrapers angayenza kulezi zinhlobo zamacala? Bangakhipha kanjani idatha uma amanye amakhasi ewebhu angasebenzisi i-API? Iqiniso liwukuthi bangakwazi ukuqeda amawebhusayithi ngezindlela eziningi. Sebenzisa
Sebenzisa i-Google Amadokhumenti weZingcono
Ngokusebenzisa i-Google Amadokhumenti, angakwazi ukulanda lonke ulwazi oludingayo. Bangayisebenzisa cishe cishe wonke ulimi lohlelo, njenge-Python - giochi gonfiabili piemonte. I-Python iyilimi elinamandla kakhulu lohlelo, okulula ukuyisebenzisa futhi ivumela abahleli ukuxhuma iphrojekthi yabo ezweni langempela. Ivumela abasebenzisi bayo ukuba baveze imiqondo ehlukene emigqeni yocingo nezinye izilimi zokuhlela, njengeJava.
Imfucumfucu Enhle (i-Python Library): Ithuluzi Elimangalisayo Lemisebenzi Esheshayo
Umtapo wolwazi we-python uvumela ukuguqulwa okusheshayo kwi amaphrojekthi okuhlunga iwebhu futhi inikeza amatafula amaningi ukwenza okuthile umsebenzi. Isibonelo, i-BeautifulSoup iyithuluzi elilula lemisebenzi esheshayo, njengokudonsa idatha ehlukahlukene, njengezinhlu, oxhumana nabo, amatafula nokuningi. Empeleni, i-BeautifulSoup inikeza abasebenzisi bayo izindlela ezithile ezilula futhi eziphumelelayo zokuhamba, ukucinga nokuguqula idatha ethile. Ngoba, isibonelo, kuthatha idokhumenti ye-HTML, futhi iyayichitha, ngokudala isakhiwo esifanayo ememori. Ngaphezu kwalokho, iguqula ngokuzenzakalelayo noma yimaphi amadokhumenti angenayo ku-Unicode, ngakho abasebenzisi akudingeki bacabange ngokuphela.
Izici zeSobho Elihle
Abasebenzisi bangakwazi ukufaka leli thuluzi eliphumelelayo lokukhipha kokubili izinhlelo zeWindows neLinux. Bese-ke, bangahamba futhi bafunde indlela yokusebenzisa uhlelo kalula. Bangabona zonke izibonelo ezidingekayo ukuze bathole umbono wokuthi bazosebenzisa kanjani lolu hlelo. Lezi zibonelo zingabasiza baqonde uhlelo ngcono. Kuyisiqondiso esiwusizo sokukwazi kangcono ukuthi i-albhamu ingakwazi kanjani ukukhipha idatha emakhasini ahlukahlukene ewebhu.
Yenza idatha ehlukanisiwe ibonakale njengedokhumenti yangempela. Kodwa esimweni lapho kunezinye amaphutha emcimbini othile, isobho esihle sibona futhi siphinde sinikeze abasebenzisi bayo isakhiwo esihle. Isidlo esihle sinikeza ezinye izindawo ezinhle, ezinika amagama e-HTML amagama, ukuze enze kube lula kubasebenzisi. Ama-Web scrapers kudingeka akhumbule, isibonelo, ukuthi into eyodwa ingaba nezinhlobo eziningi zamakilasi futhi ekilasini ingahlukaniswa ngezici. Ngamunye walezi zakhi zingaba ne-id eyodwa kuphela, engasetshenziswa ekhasini elilodwa kuphela. Isobho esihle sihle kakhulu, esakhiwe ngokuyinhloko kumaphrojekthi afana ne-web scraping. Ihlinzeka ngezindlela ezithile ezilula kubasebenzisi bayo ukuguqula umuthi we-parse. Lolu hlelo lolimi lwakhiwe ngaphezulu kwezingxenye ezihamba kahle ze-Python, njengeLXML futhi iguquguquka kakhulu. Eqinisweni, ithola idatha ehlungiwe futhi iqoqa yonke imininingwane edingekayo ye-web scrapers kungakapheli amaminithi.